Fantaro i Roy Boney, Mitantana ny kaonty Twitter @NativeLangsTech mandritra ny herinandron’ny 16-22 mey 2019 · Global Voices teny Malagasy
Fantaro i Roy Boney, Mitantana ny kaonty Twitter @NativeLangsTech mandritra ny herinandron'ny 16-22 mey 2019
Voadika ny 17 Mey 2019 5:32 GMT
Sary nomen'i Roy Boney.
Amin'izao taona 2019 izao ka ao anatin'ny fanentanana media sosialy hankalazana ny fimaroam-piteny an-tserasera [mg], hifandimby ireo mpikatroka sy mpanandra-teny vazimba amerikana sy avy amin'ny firenena voalohany hitantana ny kaonty Twitter @NativeLangsTech hizara ny zava-niainan-dry zareo amin'ny fanomezana aina indray sy fampiroboroboana ny fiteny vazimba teratany. Ity lahatsoratra fampahafantarana ity izao hiresaka momba an'i Roy Boney (@royboney) sy izay kasainy horesahana mandritra ity herinandro ity.
Rising Voices: Miangavy mba lazao anay ny mombamomba anao.
ᎧᏂᎦ ᎪᎳᎭ (Kaniga Kolaha) no anarako Cherokee. Mianatra ny teny Cherokee ho fiteny faharoa aho ary tia zavakanto sy teknolojia. Mpitantana ny programam-piteny Cherokee aho ao amin'ny Cherokee Nation Education Services.
RV: Manao ahoana ny toeran'ny fiteninareo amin'izao fotoana na amin'ny aterineto na ivelan'ny aterineto?
Zakan'ny iOS, Android, Mac OS, Windows, Google Search, Google Maps, ary Gmail ny fiteny Cherokee. Afa-mampiasa ny fitenanay amin'ny sehatra media sosialy rehetra ihany koa ianao. Eo ho eo amin'ny 2000 eo no maila-piteny Cherokee mbola velona amin'izao fotoana izao.
RV: Lohahevitra tahaka ny ahoana no kasainao ifantohana mandritra ny herinandro itantananao ny kaonty Twitter @NativeLangsTech?
Ho asongadiko ireo ezaka famelomana aina indray ny fiteny ao amin'ny Firenena Cherokee toy ny kilasy an-tserasera, sekoly filomana, programam-pifehezana fianarana ary ny programam-piarahamonina isankarazany toy izay mifantoka amin'ny teknolojia.
RV: Inona ny tena mampandrisika anao havitrika nomerika ho amin'ny fiteninao? Inona ny fanantenanao sy ny nofinofinao ho amin'ny fiteninareo?
Nihalehibe tao amin'ny fianakaviana manana ny fiteny Cherokee ho fiteny voalohany aho. Maro amin'ireo ao amin'ny fianakaviana ireo no efa lasa ka hitako ny fiantraikan'ny fahabangana ao amin'ny vondrom-piarahamoninay. Tiako ny haheno ny fiteninay hiresahan'ny sokajintaona rehetra ao amin'ny vondrom-piarahamonina misy anay.